राजनेता कि लाजनेता ? – Karnalisandesh
प्रकाशित मितिः २४ कार्तिक २०७७, सोमबार १८:२१ November 10, 2020
भनिन्छ, संगत गुन, पारंगत। आदर्श मान्छेको संगत गरे, उत्तम मान्छे बनिन्छ। खत्तम मान्छेको संगत गर्दा झन् खत्तम बनिन्छ। खराब मानिसको संगत गर्दा खत्तम बन्नु र असल मानिसको संगत गर्दा असल कहलिनुमा केही तर्क, कारण र सत्यहरु छन्। यति उल्लेख गरिसकेपछि आलेखको शीर्षमाथिको अर्थ खोज्नु आवश्यक रहेन। तथापी राजनेतासँग लाजनेता शब्दको तुलना किन गरियो ? यो अवस्था किन आयो ? के हाम्रो देशमा राजनेता जन्मिएका छन् ? कसलाई भन्ने राजनेता ? किन नभन्ने लाजनेता? यस्ता प्रसँगहरुको बारेमा केही चर्चा भने अवश्य गर्ने जमर्को गरिने छ।
अन्त्यमा, सबैभन्दा पहिले कार्यकर्ताहरु सच्चिनु पर्छ। नेतृत्वलाई सच्याउनु पर्छ। समयमै नसच्चिने हो भने, नेता तथा राजनेता बन्ने सपनाहरु कार्यकर्तामै भङ्ग हुन सक्छन्। साथै अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल ट्रम्पको जस्तै पतन र उनी जस्तै लाजनेता बन्नु पर्ला। सम्पूर्ण कार्यकर्ताको पनि नेता र नेताको पनि राजनेता बन्ने मनमा हरि पलाओस्। हरेक कार्यकर्ताको मनमा बस्न सक्ने, जनताको मनमा बस्न सक्ने नेता जन्मिनुपर्छ। नेतृत्वको अनुहारमा कान्ति, सम्भावना, त्याग, निष्ठा, वैचारिक तथा सैदान्तिक क्षमता र आशा अपेक्षा देख्न सकियोस्। कार्यकर्ताहरुमा नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नसक्ने क्षमता बृद्धि होस्। आसक्त महिमागान र अन्धभक्ति पूजा गर्ने काम बन्द होऔन। राजनीति निःस्वार्थ र निःशर्त बनोस्। लाजनेता होईन, राजनेता बन्ने लक्ष्य निर्धारण होस्। नजिँकिदै गरेको तिहार र छठ पर्वको शुभकामना।